Inona no atao hoe "hosoka amin'ny aterineto"? & Ndash; Ny Semalt no manome ny valiny
Inona no atao hoe "hosoka amin'ny aterineto"? - Ny Semalt no manome ny valiny
Ny aterineto dia loharano ara-toekarena goavana, izay manana tombony maro ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa azy. Olona maro no afaka manararaotra ny tanjaky ny tsena, izay aterineto. Ny orinasa miaraka amin'ny tranokala e-commerce dia afaka mahazo mpanjifa maneran-tany. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, manangana tranokala miaraka amin'ireo mpampiasa farany ny olona. Misy ny vintana tsy dia lehibe loatra amin'ny fandinihana ny fiarovana ny cyber security ao amin'ny tranokalanao - planning horaire de travail entreprise. Na izany aza, ny hosoka amin'ny aterineto ahafahana manamboatra tranokala e-commerce dia azo antoka amin'ny alalan'ny fampifangaroana ireo karazana fomba fisorohana maro.
Ny fahalalàna momba ny hosoka amin'ny aterineto dia mety hahasoa ny tranonkala amin'ny teknikam-pandraharahana ankapobeny toy ny Search Engine Optimization (SEO) dia miankina amin'ny fahombiazan'ny tranonkala fiarovana. Google dia afaka manamarika tranonkala ho tsy azo antoka, izay mety hahatonga ny mpividy sasany hatahotra handika ny tranokalany. Zava-dehibe ihany koa ny manadihady ny tranganà hosoka amin'ny aterineto. Azonao atao ny mamonjy ny fiarovana ny mpanjifanao sy ny an'ny orinasa e-varotra.
Ross Barber, Semalt Mpitantana Success Manager, dia mandinika ny karazana hosoka amin'ny aterineto: 8)
Hacking. Ireo hackers dia manam-pahaizana amin'ny solosaina izay afaka manova ny rafitra ary mahazo fidirana tsy nahazoan-dalana amin'ny ankamaroan'ny rafitra..Zava-dehibe ny miala amin'ny hackers. Ny hackers dia afaka manamboatra orinasa tsy manompo ny asa noho ny fanafihan'ny DoS. Amin'ny tranga hafa, ny hosoka amin'ny aterineto toy ny fangalarana karatra amin'ny banky dia mitranga amin'ny fanampian'ny hackers. Ilaina ny mitandrina momba ny teknolojia hacking toy ny SQL Injection sy Cross Site Scripting (XSS). Azonao atao ihany koa ny manentana fanentanana ho an'ny mpanjifanao mampahafantatra azy ireo ny toro-hevitra manan-danja mba hijanona ho voaro.
Spamming. Ny hafatra momba ny spam dia mailaka izay miezaka ny hanana antony tsy mazava. Mampiasa karazana teknika rehetra ny spam mba hamerenana ny olom-pehezany hanitsy rohy izay toa manimba na miteraka voka-dratsy. Ohatra, mety misy trangan-dry zareo tranainy izay afaka manakatona ny solosaina ary manala fanazavana sarobidy. Ireo virosy ireo koa dia mety hanimba ny rafitra manontolo izay mitarika ho amin'ny fahaverezan'ny serivisy amin'ny solosaina.
Phishing. Ny famonoana dia fomba iray izay ampiasain'ny ankamaroan'ny mpisandoka hamitaka ny olona amin'ny fanomezana fanomezan-dàlana fidirana. Mety hanaparitaka ihany koa ny fampahalalam-baovao hafa izy ary koa ny fanaovana hacks maro hafa. Ny famonoan-tena dia ny famoronana pejy web duplicate. Ny hacker dia tsy maintsy mitady fomba hanodinana ilay niharam-boina amin'ny fampiasana ny tranokala sandoka ho toy ny ara-dalàna. Ny mpampiasa dia afaka mahazo ny fidirana amin'ny seha-pifandraisana tsy misy ahiahy amin'ny mpanjifany raha tsy misy ny faneken'izy ireo.
Ny fiarovana Cyber ​​no ilàna ny tranonkala e-commerce maro. Zava-dehibe ny manao tranonkala iray azo antoka amin'ny asan'ny hackers ary koa ny iray ahafahan'ireo mpanjifany mamidy fividianana tsy misy fiatraikany. Vokatr'izany, zava-dehibe ny fananana fahalalana sasany mahakasika ny hosoka amin'ny Internet. Maro ny tranga misy tsimok'aretina sy hacking noho ny tsy fahampian'ny fahatsapana ireo niharam-boina tamin'ny fanafihana. Vokatr'izany, ny toetry ny fiarovana cyber dia mijanona ao amin'ny fanjakana tena izy. Ity toro-lalana ity dia manana toro-hevitra momba ny hosoka amin'ny aterineto. Ireo olana toy ny fangalarana karatra amin'ny carte de crédit sy ny fangalarana ny maha-izy anao dia tsy afaka hiatrika anao rehefa mampihatra ireo fepetra ireo.